Augustine Volcano Alaska USAt argamu
Volcanon banamu yokan tarsa fulla lafa irra yokan crust irratti ta'u yoo ta'u, kuni immo cabbin baqqe kan ho'a qabu, darra fi gasiin akka jalla lafa baqatte ba'u eyyama. Geggefami Volcano kuni yoo ba'itti cabbi qabatte, yerro ta'en bodda kuni immo "form" (yokan fakki) akka garra yokan waan akka garra fakkattu umma.
Volcanon yerro guddo kan argaman bakka tectonic plateiin gargari itti ba'an yokan walitti dhufaan kessatti. Mid-oceanic ridgeiin akkuma Mid-Atlantic ridge fakkena gossa volcano kan yoo "tecnotic plate"iin gargara ba'an (divergent tectonic plate)iin kan umamu qaba. Pacific Ring of Fire immo fakkena gossa volcano walitti dhufu "tectonic plate" (convergent tecnotic plate)iin umamu qaba. Yoo kaneen oliitiin walitti ilallani Volcanon yerro bayye yoo "tectonic plate"iin wal-birra darban hin umamu. Kan malee volcanon kan itti umamu danda'u yerro crustiin lafa gargara ba'u (stretch) ta'u fi akkasumas yerro crustiin qallatu (kan "non-hotspot intraplate volcanism" jedhamu) kunis kan ta'u African Rift Valley, Rhine Graben kan Eifel volcano qabu kan Europe kessatti argamu, Wells Gray-Clearwater Volcanic Field fi Rio Grande Rift North Americat argamu dha.
Akkasumas Volcanon "mantle plume" (kan hotspots jedhamaniin) umamu danda'a, hotspotsiin immo kutta lafa danga plate irra faggatan jiran kan akka Hawaiian Islandsiit jalqabu danda'a. Kan nama gamachisu immo, hotspotiin bakka birra solar system kessatti kessattu planet fi batti cabbi dhakaa qaban kessatti ni argama.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Volcano&oldid=22281" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 7 Bitootessa 2013, sa'aa 18:02 irratti.